ဂိမ်း ODNOKLASSNIKI ဘို့ PLUG-IN ကို DOWNLOAD လုပ်လုပ်နည်း - အတန်းဖော် - 2019
ဂိမ်း Odnoklassniki များအတွက်ဒေါင်းလုပ် plug-in ကို
အသုံးပြုသူအလွန်နှေးကွေးစွာဖွင့်လှစ်ရန်စတင်လျင်မြန်စွာ load ရန်အသုံးပြုကြသည်ဝဘ်စာမျက်နှာများကိုအကြောင်း, ယခုအချက်ကိုရင်ဆိုင်ရနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ကိုသင်ပြန်လည်စတင်ရန်လျှင်, သူကကူညီပေမယ့်နေဆဲကွန်ပျူတာတစ်လုံးနှင့်အတူအလုပ်လုပ်စေခြင်းငှါ, နှေးကွေးခဲ့သည်။ ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ကျနော်တို့တင်စာမျက်နှာများတွင်ကူညီဖို့, ဒါပေမယ့်လည်းသင့်ရဲ့ PC ကို၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေမသာတဲ့ကြေညာချက်ပူဇော်ပါလိမ့်မယ်။
Long ကဝဘ်စာမျက်နှာများကိုဖွင့ ်. : ဘာလုပ်ဖို့
ယခုငါတို့, သင့် Registry ကိုရှင်းလင်း startup ထဲကမလိုအပ်တဲ့ဖယ်ရှားခြင်းနှင့် PC ကို Antivirus ကိုစစျဆေးဖို့အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်အစီအစဉ်များ uberom ။ ငါတို့သည်လည်းကျနော်တို့ကဒီ CCleaner ကိုအစီအစဉ်အားလုံးအတွက်ဘယ်လိုကူညီပေးနိုင်သလဲဆိုတာကိုကြည့်။ ကိုယ့်တဦးတည်းပြခြေလှမ်းများ၏ပြီးသွားချိန်ကအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်ဖြစ်စေခြင်းငှါ, စာမကျြနှာပုံမှန်အားဖြင့် load ပါလိမ့်မယ်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့အားလုံးခြေလှမ်းများယေဘုယျအားဖြင့်သင့်ရဲ့ PC ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေရာတစျခုကတဦးတည်းထွက်သယ်ဆောင်ရန်အကြံပြုသည်။ ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆင်းရကြပါစို့။
အဆင့် 1: မလိုချင်တဲ့အစီအစဉ်များကိုဖယ်ရှားပစ်ပဲ
သငျသညျပထမဦးဆုံးကွန်ပျူတာပေါ်မှာရှိသမျှသောမလိုအပ်တဲ့ပရိုဂရမ်များကိုဖယ်ရှားသင့်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, ပွင့်လင်း "My Computer ကို" - "အစီအစဉ်များကို Remove".
သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာနှင့်နောက်လာမည့်သတ်မှတ်ထားသောခံရဖို့က၎င်း၏အရွယ်အစားမှာအသီးအသီးမှနံပါတ်ပေါ် installed အစီအစဉ်များကိုတစ်ဦးစာရင်း၏ Display ကိုမျက်နှာပြင်။ သငျသညျသငျကိုယျတိုငျ install လုပ်ပြီးသောသူတို့ကိုအဖြစ်စနစ်တကျနှင့်လူသိများတဲ့ developer များ (မိုက်ကရိုဆော့ဖ, Adobe က, etc) စွန့်ခွာရပေမည်။
သင်ခန်းစာကိုဘယ်လို Windows ပေါ်မှာအစီအစဉ်များကို uninstall လုပ်ဖို့
အဆင့် 2: အမှိုက်၏ဖယ်ရှားရေး
မလိုအပ်တဲ့စွန့်ပစ်ရာမှတစ်ခုလုံးကိုစနစ်နှင့် web browsers တွေကိုရှင်းလင်းမယ့်အခမဲ့ပရိုဂရမ် CCleaner ကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။
CCleaner ကိုအခမဲ့ Download
ဒါကြောင့်အပြေး, အ tab ကိုသွားပါ "သန့်ရှင်းရေး", ပြီးတော့တဦးတည်းကလစ်နှိပ်ခြင်းဖြင့်တဦးတည်း "အားသုံးသပ်ခြင်း" - "သန့်ရှင်းရေး"။ ဒါဟာသည်, တစ်ဦးကို tick မရွေ့နှင့် setting များကိုပြောင်းလဲသွားကြသည်မဟုတ်, ဒါကြောင့်မူလကကဲ့သို့အရာအားလုံးကိုစွန့်ခွာဖို့အကြံပြုလိုတယ်။
ပွင့်လင်းတဲ့ item "Registry ကို", ပြီးတော့ "ရှာရန်" - "ပြင်ဆင်ခြင်း"။ သင့်အနေဖြင့်ပြဿနာမှတ်တမ်းများနှင့်အတူဖိုင်တစ်ဖိုင်ကယ်ဖို့သတိပေးခံရလိမ့်မည်။ ကျနော်တို့အမှုထဲမှာထားခဲ့နိုင်သည်။
အဆိုပါ browser ကနေအပျက်အစီးများရှင်းလင်းဖို့ကိုဘယ်လို
အမှိုက်သရိုက်အနေဖြင့် Windows ကိုရှင်းလင်းနည်း
အဆင့် 3: မလိုအပ်သော startup ၏သန့်စင်
အလားတူ CCleaner ကိုဤအစီအစဉ်ကိုအလိုအလျောက်စတင်အဘယ်အရာကိုမြင်ရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဤတွင်အခြားရွေးချယ်စရာဖြစ်ပါသည်:
ပေါ်မှာ Right-click "Start"ထိုအကို select လုပ်ပါပြီးနောက် "Run ကို".
ကျွန်တော်တစ်ဦး string ကိုထဲသို့မဝင်ရရှိရာ Display ကိုမျက်နှာပြင်ဘောင် Msconfig နှင့်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်အတည်ပြု "အိုကေ".
ပေါ်လာပြတင်းပေါက်များတွင် link တစ်ခုအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Manager ကို".
ကျနော်တို့လျှောက်လွှာများနှင့်ထုတ်ဝေသူတွေ့နိုင်ပါသည်ရှိရာအောက်ပါဘောင်, Run လိုက်ပါ။ လုပ်နိုင်သော, သင်မလိုအပ်တဲ့ disable နိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ကိုပိုပြီးကျနော်တို့ CCleaner ကိုသုံးပြီး autostart ကိုကြည့်ဖို့ဘယ်လို, ယခုဆနျးစစျကွပါစို့။
အဆိုပါအစီအစဉ်တွင်သွားပါ "ဝန်ဆောင်မှု" - "Startup စာမျက်နှာ"။ အဆိုပါအရံမှုစနစ်အစီအစဉ်များနှင့်လူသိများတဲ့ထုတ်လုပ်သူများနှင့်အရာကြွင်းလေငါတို့သည်မလိုအပ်သောကို turn off ။
Windows7မှာ autorun ကို disable လုပ်နည်း
Windows 8 startup Settings များ
အဆင့် 4: Scan ကို Antivirus ကို
ဒါဟာခြေလှမ်းဗိုင်းရပ်စ်များနှင့်ခြိမ်းခြောက်မှုများအဘို့စနစ်တစ်ခုစာရင်းစစ်လုပ်ဆောင်သွားရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, ငါတို့ antivirus ဆော့ဖ်ဝဲအမျိုးမျိုး၏တဦးတည်းကိုအသုံးပြုဖို့ပါလိမ့်မယ် - သူက MalwareBytes ။
အသေးစိတ်: အ utility ကို AdwCleaner ကို အသုံးပြု. သင်၏ကွန်ပျူတာပျော်စေ
ဒေါင်းအစီအစဉ်နှင့်ပြီးရင်တော့ဖွင့်ပါ "တစ်စကင်ကို Start".
အခုဆိုရင်သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာ effect ကိုယူပြောင်းလဲမှုများများအတွက် restart ချလိုက်ပါ။
ငါသင်ဤညွှန်ကြားချက်ကိုကူညီမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်, အားလုံးပါပဲ။ ပြီးသားမှတ်ချက်ပြုအဖြစ်, တကပြည့်စုံအားလုံးကိုလုပ်ရပ်များထွက်သယ်ဆောင်နှင့်အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်တစ်လထိုသို့ပြုမှနှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။